Ku quusin wabiga balliga guduudka ah, Hillier Hillier | Safarka Absolut
Sawir | Godka Warqadda
Planet Earth waa meel soo jiidasho leh oo aan marnaba ka joogsan doonin inay naga yaabiso. Ma ogtahay in Ustaraaliya ay kajirto haro biyaheeda ay yihiin casaan dhalaalaya? Waa Harada Hillier, balli asal ahaan qarsoodi ah oo ku yaal Jasiiradda Dhexe, jasiiradda ugu weyn jasiiradaha Australiya ee La Recherche.
Helitaanka meesha uu ku yaal Harada Hillier ma sahlana. Dad badani fursad uma helin inay si shakhsi ah u arkaan sababtoo ah sababo la xiriira ilaalinta deegaanka, ugu badnaan waxaad u duuli kartaa oo keliya jasiiradda si aad u aragto harada saaran diyaarad helikobtar ah oo maalin walba ka duusha garoonka diyaaradaha ee Esperance.
Haddii mustaqbalka aad jeceshahay inaad safar ugu baxdo Australia si aad u ogaato muuqaalkeeda qurxoon, dabeecaddeeda iyo meelaheeda sida gaarka ah Harada HillierKadib waxaan si faahfaahsan kuugu sheegi doonaa wax walba oo ku saabsan badaha quruxda badan ee casaanka leh.
1 Waa maxay Hilli Hillier?
2 Ayaa daahfuray harada Hillier?
3 Sidee loo helay harada Hillier?
4 Maxay biyaha harada Hillier u yihiin casaan?
5 Sidee loo booqdaa Lake Hillier?
6 Harooyinka kale ee gaarka ah ee adduunka
6.1 Harada Clicos (Isbaanish)
6.2 Harooyinka Kelimutu (Indonesia)
6.4 Harada Natron (Tansaaniya)
Waa maxay Hilli Hillier?
Hillier Lake waa balli qurux badan oo dhererkiisu yahay 600 mitir oo dhererkiisu yahay Jasiiradda Dhexe, jasiiradda ugu weyn jasiiradaha La Recherche ee Galbeedka Australia, meel hawd ah oo marinkeedu adag yahay. Waxay caan ku noqotay adduunka midabkiisa gaar ahaaneed ee biyaheeda, taas oo ka dhigaysa mid aad u sawiran. Khibrad muuqaal ah oo layaableh!
Sawir | Tag Barashada Australia
Ayaa daahfuray harada Hillier?
Soo helitaanka harada Hillier ee Australia oo uu sameeyay sawir-qaade British ah isla markaana naakhuude ka ahaa Matthew Flinders qarnigii XVIII. Baahiye caan ku noqday inuu noqdo kii ugu horreeyay ee ku wareega agagaarka jasiiradda weyn ee Ustaraaliya isla markaana ahaa qoraaga suugaanta sahaminta ee qiimaha badan, inta badanna loogu talagalay Oceania Qaarad ku dhex taal gudaha gudaha waa qaar ka mid ah kuwa ugu xun uguna quruxda badan adduunka.
Sidee loo helay harada Hillier?
Maalinta safarka ee Jasiiradda Dhexe, Flinders waxay go'aansadeen inay fuulaan meesha ugu sareysa si uu u baarto hareeraha. Waxay ahayd markaa ka dib markuu ka yaabay sawirkaas cajiibka ah ee indhihiisa ka muuqday: ee haro weyn oo dhalaalaysa oo casaan ah oo ku xeeran ciid iyo hawd.
Sahmiye kale oo baqdin badan, John Thistle oo ah kabtanka markabka safarka, kama uusan labalabeyn inuu u dhowaado harada lafteeda si uu u arko haddii waxa uu arkay ay dhab tahay ama ay saameyn indho-indheyn ku timid. Markuu u soo dhowaaday, wuxuu ku helay layaab weyn oo uusan ka labalabeyn ka qaado saamiga biyaha harada Hillier si aad ugu muujiso asxaabtaada kale. Weli wey iska ilaalisay midabkeeda buluugga ah ee buluugga ah oo aan shaki ku jirin xitaa harada. Maxay ka dhigan tahay?
Maxay biyaha harada Hillier u yihiin casaan?
Waa qarsoodiga weyn ee Lake Hillier taas Qofna ma awoodin inuu muujiyo 100% waa sababta biyaheeda ay u yihiin casaan. Baarayaasha badankood waxay u maleynayaan in balligu leeyahay midabkan sababo la xiriira bakteeriyada ku jirta qolofta milixda. Qaar kale waxay soo jeedinayaan in sababta ay tahay isku darka Halobactoria iyo Dunaliella salina. Arintaan wali majiro wax isku raacsan oo cilmiyaysan sidaa darteed asbaabaha ayaa wali ah jahwareer.
Sidee loo booqdaa Lake Hillier?
Waxay sheegtay in Hillier Hillier ay ku taal Jasiiradda Dhexe, oo ah jasiiradda ugu weyn jasiiradaha Australia ee La Recherche. Maaddaama marinku aad u dhib badan yahay, booqashada haradaas waxaa lagu sameyn karaa oo keliya iyadoo lagu duulayo aagga diyaarad helicopter ah oo ka socota garoonka diyaaradaha Esperance. Waa hawl qaali ah, laakiin sidoo kale waa khibrad.
Harooyinka kale ee gaarka ah ee adduunka
Sawir | Rauletemunoz ee Wikipedia
Harooyinka sida Michigan, Titicaca, Tanganyika, Victoria ama Baikal ayaa ka mid ah harooyinka ugu caansan adduunka.
Si kastaba ha noqotee, qaaradaha oo dhan waxaa jira uruurinno kale oo biyo yar oo la yaqaan oo iyaguna ifkooda u ifaya mahadnaqooda awgood asal ahaan, sababo la xiriira isku-dhafka biyahooda, ficillada kuleylka sare ee iyaga ama noolaha ku dhex nool. Sidaas darteed, Meeraha oo dhan waxaa ku yaal harooyin qurux badan oo midabbo kala duwan leh oo mudan in la booqdo.
Harada Clicos (Isbaanish)
Isbaanishka sidoo kale waxaa jira haro aad u gaar ah oo la mid ah Hillier laakiin biyaheeda ma aha casaan dhalaalaya ee waa cagaar sumurud ah. Waxaa loo yaqaan harada Clicos waxayna ku taal xeebta galbeed ee magaalada Yaiza (Tenerife) oo ku dhex taal seeraha dabiiciga ah ee Los Volcanes.
Waxa ka dhigaya haantan mid gaar ah waa midabka cagaaran ee biyaheeda sababtuna tahay joogitaanka tiro aad u tiro badan oo noolaha dhirta ah oo ganaax ku jira Harada loo yaqaan 'Clicos' waxaa laga soocay badda oo ay leedahay xeeb ciid ah kuna xiran iyada dillaacyo dhulka hoostiisa ah. Waa aag la ilaaliyo sidaa darteed dabaasha lama ogola.
Harooyinka Kelimutu (Indonesia)
In Indonesia waxaa jira meel loo yaqaan jasiiradda Flores halkaas oo Kelimutu volcano, oo leh saddex haro oo biyahoodu midabkoodu beddelaan: laga bilaabo turquoise ilaa casaan ilaa buluug madow iyo bunni. Cajiib run ah? Waa dhacdo mudan in la arko taas oo u sabab ah isku darka gaasaska iyo uumiga ka soo baxa gudaha fulkaanaha oo soo saara falcelis kiimikaad kala duwan marka heerkulku sarreeyo.
In kasta oo ay ahayd fulkaano firfircoon, qarxitaankii ugu dambeeyay ee Kelimutu wuxuu ahaa 1968. Dhamaadkii qarnigii XNUMXaad, bey'adeeda waxaa looga dhawaaqay inay tahay beero qaran ee Indonesia.
Waxay ku taal Alberta Banff National Park waa Moraine Lake, haad qurux badan oo asal ahaan baraf leh oo biyaheeda buluuga ah ee aadka u daran ay ka yimaadaan dhalaalka.
Deegaankeeda dabiiciga ah gabi ahaanba waa mid cajaa'ib leh maadaama ay ku wareegsan yihiin buuraha waaweyn ee Rockies ee ku yaal Dooxada Tobanka Meelood. Aqoonsiyadan, dad badan oo tamashleyaal ah ayaa ku qulqulaya Lake Moraine si ay u qaataan aragtida. Biyaheeda ayaa si xoog leh u iftiimaya inta lagu jiro maalinta, marka qorraxdu si toos ah ugu dhacdo harada waxaa lagugula talinayaa inaad subaxa hore aado si aad u aragto, markay biyuhu u muuqdaan kuwo hufan oo ka tarjumaya muuqaalka quruxda badan ee lagu qaabeeyey.
Waxa intaa u dheer harada moraineIsla Banffiga Qaranka waxaa ku yaal harooyinka Peyton iyo Louise, sidoo kale waa qurux badan yihiin.
Harada Natron (Tansaaniya)
Waxay ku taal xadka u dhexeeya Tansaaniya iyo Kenya, Harada Natron Waa haro biyo-milix leh oo aan bad lahayn, oo ka sarraysa Dooxada Weyn ee Weyn. Sababtoo ah sodium carbonate iyo xeryahooda kale ee macdanta ah ee ku qulqulaya harada hareeraha buuraha hareeraheeda, biyaheeda alkaline waxay leeyihiin pH cajiib ah 10.5 sababtoo ah sodium carbonate iyo xeryahooda kale ee macdanta ah.
Waa biyo cufan oo kale ah oo u keeni kara gubasho aad u daran indhaha iyo maqaarka xoolaha u soo dhowaada, kuwaas oo u dhiman kara sumeyn. Sidaa darteed, Harada Natron waxay la kacday cinwaankii ugu dhimashada badnaa dalka.
Laakiin marka la eego muuqaalkiisa dibedda, lagoonkani wuxuu soo saaraa midab gaar ah oo casaan ama casaan ah, mararka qaarkood xitaa oranji meelaha hoose, sababtuna tahay shey-ku-noolayaasha ku nool qolofka ay abuurtay cusbada alkaline. Cajiib!
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Qaado qubeyska balliga guduudka ah, Hillier Lake